Udo diri gi | Martech Zone
Etoro m n’òtù Roman Katọlik. Ruo taa, akụkụ nke masịrị m kachasị mma bụ mgbe mmadụ niile ga-emerịrị ihere ha, kwee onye agbata obi ha aka, sị, "Udo dịrị gị." Azịza ya, “Gị na gị.”
Na Arabic, nke a bụ “As-SalÄ ?? mu Alaykum”. Azịza ya, “Alaykum As-SalÄ ?? m”.
N’asụsụ Hibru, “Shalom aleichem”. Azịza ya, “Aleichem shalom”.
Ma mgbe ahụ, n'ezie, enwere ngwa ngwa n'asụsụ ọ bụla… "Udo", "Salam" na "Shalom".
Ọbụghị ịtụnanya na okpukperechi nile nke Moses na-esite n’okwu udo wee kelee onwe ha, ma anyị enweghị ike inweta ya?
Dee 17, 2006 na 8: 17 AM
Ọ bụghi ịtụnanya na okpukperechi nile nke Mosis na-agbadata n'okwu a bụ okwu udo, mana anyị enweghị ike inweta ya?
Lee ka o si bụrụ eziokwu! Ma, mgbe anyị kelere ibe anyị, anyị na-ekwu ya?
Echiche dị n’azụ Shalom bụ na anyị bu n’obi ya. O di nwute, everyones mere ka ọ bụrụ ihe eji eme ihe.
Udo diri anyi bu aha akwukwo ohuru m. Mụ onwe m chọpụtakwara na akụkụ ahụ anyị ga-abụ ihe omume na-adọrọ mmasị. Nke ahụ rụrụ oke aka n'ịhọrọ aha m. Ya mere, a sị m mmadụ niile,
Jul 9, 2007 na 7:47 PM
daalụ ma soro gị…
Feb 13, 2008 na 1:55 PM
Ezi post. Make na-eme ụfọdụ ndị isi ihe ọtụtụ ndị mmadụ
“Ruo taa, ihe kacha amasị m bụ na mmadụ niile ịkwụsị ime ihere, kwee onye agbata obi ha aka, sị, 'Udo dịrị gị.'”